search 31 jobs founded for you
57000 MMK This is the average bid amount by the applicants.
5 applicants (Avg bid) 57000 MMK
3 applicants (Avg bid) 200000 MMK
2 applicants (Avg bid) 200000 MMK
Programming သင်ပေးရန် ဆရာတစ်ဉီးလိုအပ်နေပါသည်။ Basic programming မှစသင်ပေးရပါမည်။ Mandalay တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။ အိမ်သို့သွားရောက်သင်ပေးနိုင်ရမည်။ သင်ပေးသူသည် AI နှင့် cloud ပိုင်းသိကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။ စိတ်ဝင်စားပါက ၁ လချင်းဈေးနှုန်းဖြင့် လျှောက်ထားပေးပါရန်။
148182 MMK This is the average bid amount by the applicants.
11 applicants (Avg bid) 148182 MMK
Herballines is the leading personal care brand which offers whole range of products which can use all family members. We currently having strong existence in shampoo, shower, facial cleanser, beauty olive oil and hand wash category.We are looking for creative content writer for Hand wash category&nb...
CSS Typing Content Writing Unicode Writing skills 111 +2
821407 MMK This is the average bid amount by the applicants.
27 applicants (Avg bid) 821407 MMK
Layout Design ဆွဲပေးရန် designer များအလိုရှိပါသည်။ Education နှင့်ပတ်သက်သည့်စာအုပ်ရှိ Layout Design များကိုဆွဲပေးရမည်ဖြစ်သည်။ Monday to Saturday လုပ်ရမည်။ work from home လုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အစည်းဝေးများလုပ်သည့်အခါနှင့် brief ပေးသည့်အခါများတွင် ရံဖန်ရံခါလည်း ရုံးသို့သွားနိုင်ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက်...
Photoshop Illustrator Adobe inDesign
Senior Android Developer (React Native)
370000 MMK This is the average bid amount by the applicants.
2 applicants (Avg bid) 370000 MMK
Senior Reactive Native Android Developer လိုအပ်နေပါသည်။- Client ၏ ရုံးတွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။- Client ရုံးသို့ ၁ ပတ်လျှင် ၃ ရက် သွားရောက်နိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ Client ရုံးသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့်သူများသာလျှောက်ထားပေးပါရန်။ - Project ၁ ခုစာနှင့်လုပ်ရမည် မဟုတ်ဘဲ Monthly နှင...
400 - 500 MMK
63 applicants 400- 500 MMK
စားသောက်ဆိုင်များတွင် ရိုက်ထားပြီးသော အစားအသောက်ဓါတ်ပုံ (raw photos) များကို Edit ပြန်လုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ပုံ ၁၀၀ ကျော်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဈေးနှုန်းမှာ ၁ ပုံချင်းဈေးနှုန်းဖြစ်သည်။
700 - 900 MMK
30 applicants 700- 900 MMK
စားသောက်ဆိုင်များမှ အစားအစာများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရမည့် ဓာတ်ပုံဆရာများလိုအပ်နေပါသည်။ စားသောက်ဆိုင်များသို့သွားရောက်ရိုက်ကူးရမည်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ များကို edit လုပ်ပေးစရာမလိုပါ။ ရိုက်ရမည့် ပုံအရေအတွက်မှာတစ်ဆိုင်လျှင် အနည်းဆုံး ၁၀ ပုံ မှ ၅၀ ပုံအတွင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဆိုင်ပေါင်းများစွာကိုသွာ...
768750 MMK This is the average bid amount by the applicants.
8 applicants (Avg bid) 768750 MMK
App Developer လိုအပ်နေပါသည်။ Team ရှိလျှင် ပိုအဆင်ပြေပါမည်။ Client ၏ team နှင့် ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ Client ရုံးသို့ ၁ ပတ်လျှင် ၃ ရက်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ project ၁ ခုစာနှင့် လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ Monthly နှင့် သွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ ၁လချင်းဈေးနှုန်းနှင့် လျှောက်ထာ...
869098 MMK This is the average bid amount by the applicants.
15 applicants (Avg bid) 869098 MMK
To integrate chatbot with payment optionsPayment system အမျိုးမျိုးရဲ့ API တွေလှမ်းခေါ်ပြီး chatbot အတွင်းတွင် ငွေပေးချေမှုအဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။